HETSIKA FARAN’NY HERINANDRO : Hafana ny handraisan’ny mpankafy ny tarika Eric ça Va sy Marojoby
Hafana ny ao amin’ny Resto Mony misoma etsy amin’ny fiolanana mankany aminy bloc administratif iny, ny alin’ny sabotsy 08 jona izao. 6 juin 2019
Mpanakanto samy mivoy ny gadona mafana avy aty amin’ny tapany avaratra andrefan’ny nosy aty avokoa i Eric ça Va sy Marojoby sy ireo mpandihy miaraka aminy. Efa niaraka niseho sehatra ny tarika roa tonta dia izao indray hifampitaona amin’ireo mpankafy azy. Hisy koa ireo artista nasaina hanotrona io fety io, izay harahin’ny fanentanana maro loko sy ny fifaninanana ahazoana loka maro samihafa atolotry ny mpikarakara.
Efa za-draharaha rahateo ary efa matihaniana amin’ny fanomanana ny lanonana ngeza tahaka izao i Tokhid Jean Roberto, talen’ ny Mony misoma ka raitra tanteraka ny fandokoana ity hetsika iarahana amin’ny mpanakanto Eric ça va sy Marojoby amin’io farany herinandro ho avy io. Ankoatra izay dia tsy vitsy koa ny lanonana maro samihafa hotanterahina eto an-tampon-tanànan’i Mahajanga sy ny manodidina mandritra ny fety ny pantekoty ho avy io.